ကားပေါ်က ကောင်ဆိုးလေး (စ/ဆုံး) – Grab Love Story
ကားအချိန်အကြာကြီးစီးရမှာကိုတွေးပြီး ကျွန်မရင်မောမိတယ်။ ကားစီးရင် ကျွန်မက မူးတက်တယ်လေ။ ကားထွက်ခါနီးမှ ကားပေါ်တက်ထိုင်တယ်။ ပြူတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ထားပြီး ခေါင်းကို အပြင်နဲနဲထုတ်ထားလိုက်တယ်။ ဘေးခုံက လူမရှိတေါ့ နေရတာချောင်ချောင်ချိချိပဲ ။
ကားစထွက်မှလူတစ်ယောက်ပြေးတက်လာပြီး ကျွန်မ ဘေးမှာ ဝုန်းဆို ခပ်ကြမ်းကြမ်းထိုင်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ sorryပါလို့ ကျွန်မကိုတောင်းပန်တယ်။ သူ့ပုံစံကြည့်ပြီး ကျွန်မလည်း စိတ်ပြေလိုက်တာပေါ့။
မြင့်မားသောအရပ်နှင့်လိုက်ဖက်စွာ ခန္ဓာကိုယ်က ကြံ့ခိုင်တောင့်တင်းသည်။ ကားမီးရောင်အောက်မှာ အသားအရည်က ဝင်းနေသည်။ ထူထဲတဲ့မျက်ခုံး နှာတံချွန်ချွန် သေသပ်တဲ့နှုတ်ခမ်း လေးထောင့်ဆန်တဲ့မေးရိုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သူ့ပုံစံလေးက ကျွန်မထက် ၄နှစ် ၅နှစ်တော့ ငယ်မည်ထင်ပါသည်။
အလန်းစားလေးနဲ့တစ်ညလုံးကားတူတူစီးရမယ့်အရေးကို တွေးပြီး ကားမူးတောင်ပျောက်သွားသလိုပဲ။ ကားပေါ်မှာပြတဲ့မြန်မာကားကို ကြည့်နေတုန်းသူက စကားစပြောလာသည်။
“ကျွန်တော်လည်း ရန်ကုန်ထိပဲ.. ဒါနဲ့ အစ်မက တစ်ယောက်ထဲလား.. ချောချောလှလှလေးတစ်ယောက်ထဲ ခရီးမသွားသင့်ဘူးဗျ”
ကျွန်မမျက်လွှာချထားမိသည်။ ခပ်ချောချောကောင်လေးက ဘေးနားမှာထိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီး လှတယ်ပြောတာ ရင်မခုန်ဘဲ နေပါ့မလား။
“ကျွန်တော် အစ်မကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိသွားပြီ အစ်မရယ်”
မိန်းမသားမို့သာ အစဉ်လာအရမူမိပေမယ့် ကျွန်မကိုယ်တိုင်က ဒီကောင်လေး မဆွတ်ခင်က ညွတ်ချင်နေတာ။
“လွှတ်ဖူးဗျာ ချစ်တယ်ပြောမှ လွှတ်မယ်”
“အင်းကွာ…. ချစ်တယ်…. ချစ်တယ်… ကဲ… ကျေနပ်ပြီလား လူဆိုးလေး “
ကောင်လေးက မပြောမဆို ဆွဲဖက်ထားတော့ ကျွန်မဖြင့် အသက်ရှုတောင်ကြပ်တယ်။ ချစ်တယ်လို့ ဇွတ်ပြောခိုင်းတော့ ကျွန်မလိုက်လျောလိုက်ရတာပဲလေ။ နဲနဲလျော့သွားပေမဲ့ သူက ကျွန်မကိုဖက်ထားတုန်းရယ်။
ကားမီးလည်းပိတ်သွားရော သူကကျွန်မပါးကိုနမ်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မနှုတ်ခမ်းလေး ဖိကိုက်တယ်။ နှုတ်ခမ်းတစ်ခုလုံးကို စုပ်ယူပြီး သူ့လျှာလေးကို ကျွန်မပါးစပ်ထဲရောက်အောင်ထိုးထည့်တယ်။ နမ်းတာများ ကျွမ်းလိုက်တာရှင်။ လူကိုမူးမေ့ရမတက်ပဲ။ ကျွန်မက အပျိုကြီးဆိုတော့ အဲ့လိုနှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းတာကို ကိုရီးယားကားထဲမှာပဲ မြင်ဖူးတာလေ။ အခုကိုယ်တွေ့ဆိုတော့ ရှိန်းတိန်းဖိန်းတိန်းကြီး။
သူ့လျှာကို ကျွန်မပါးစပ်ထဲထိုးသွင်းတော့ ကျွန်မက စုပ်ယူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူက ကျွန်မလျှာကိ်ုပြန်စုပ်ယူပြန်တယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့လျှာတိုက်ပွဲမှာ ကျွန်မပဲ နွမ်းလျခဲ့ရတယ်။ သူ့လက်က အငြိမ်မနေဘူး။ ကျွန်မရဲ့ နို့အုံတင်းတင်းလေးကို အင်္ကျီပေါ်က ပွတ်နေတယ်။ ကျွန်မက နို့ကြီးတာရော ဘော်လီအုံက ထူတာရောကြောင့် သူ့လက်နဲ့တောင် မဆန်ချင်ဘူး။
ကျွန်မရဲ့တားမြစ်သံကို ဂရုမစိုက်စွာဘဲ ကောင်ဆိုးလေးက ကျွန်မရဲ့ဘော်လီချိတ်တွေကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အင်္ကျီအောက်ကနေလက်လျိုပြီး ဘယ်သူမှ မထိမတွေ့ဖူးတဲ့ ကျွန်မရဲ့ နို့အုံလေးကို ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် ညှစ်ပါတော့တယ်။ သူ့ရဲ့တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ လက်ကြီးရဲ့ ကိုင်တွယ်မှုအောက်မှာ ကျွန်မနို့အုံလေးက ကြေမွလုမတက်။
နာလည်းနာ ကောင်းလည်းကောင်း။ ငြီးသံထွက်မှာစိုးလို့ ကျွန်မနှုမ်ခမ်းကို အသေလိုက်ထားရတယ်။ ကျွန်မထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ နို့လှလှကြီးတွေကို ခုတောလည်း နာမည်တောင်မသိတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် မညှာမတာကိုင်ညှစ်နေတာကို ကြည်ဖြူစွာ အကိုင်ခံနေသည်။
အသံထွက်သွားပြီးတော့မှ ကျွန်မပါးစပ်ပြန်ပိတ်လိုက်ရသည်။ မအော်ဘဲနေနိုင်ပါ့မလား။ ကျွန်မရဲ့ နို့သီးသေးသေးလေးကို သူ့ရဲ့ ကြွက်သားအဖုဖုရှိတဲ့လက်ကြီးနဲ့ အားကုန်ညစ်ပစ်လိုက်တာလေ။ နာလွန်းလို့ နို့သီးလေးကို ညှစ်ချေနေတဲ့ သူ့ရဲ့လက်ကို ကျွန်မဆွဲဖယ်ပေမဲ့ သူ့လက်ကယအားသန်လွန်းတော့ မဖယ်နိုင်ဘူး။
သူက ကျွန်မနို့သီးလေးကို လက်ညှိုးလက်မနဲ့ ညှစ်ပြီး ဆွဲဆွဲပြီးချေနေသေးတယ်။ နာတယ်ထင်ပေမယ့် ကျွန်မစောက်ဖုတ်ဝဆီက ဆစ်ကနဲ ဆစ်ကနဲ ဖြစ်ပြီး အရည်တွေ တော်တော်ရွှဲလာတယ်။ ကျွန်မရဲ့ထမိန်လေးကိုဖြည်ပြီး ကျွန်မစောက်ဖုတ်ကို စမ်းတယ်။
ကောင်လေးရဲ့အမိန့်အတိုင်း ကျွန်မချွတ်ပေးလိုက်တော့ ကောင်လေးလက်လေးတွေက ကျွန်မရဲ့စောက်စိလေးကို ဖွဖွပွတ်ပေးတယ်။ ကားပေါ်မဟုတ်ဘဲ အခန်းတစ်ခုခုထဲသာဖြစ်လို့ကတော့ ကျွန်မကပြဲလန်နေအောင် အော်ငြီးမိမည်။ ခုတော့ လက်ကိုကိုက်ထားပြီး ကျိတ်ခံနေရသည်။
ကျိတ်ခံနေရင်းမှပင် အသံလေးများထွက်မိသွားသည်။ စောက်စိကို နာနာလေးဖိပွတ်ပေးတော့ စောက်ဖုတ်ထဲက အရည်လေးများစိမ့်ထွက်လာကာ ပြီးသွားတော့ နို့သီးလေးတွေတောင် ထောင်နေသည်။ ကောင်လေးရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ကောင်လေးကိုဖက်ပြီး ကျွန်မအနားယူနေပေမယ့် ကောင်လေးရဲ့လက်က ကျွန်မစောက်ပက်ထဲမှာ အနားမယူသေးဘူး။ ကျွန်မရဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို ပွတ်လိုက် ညှစ်လိုက် စောက်မွှေးလေးတွေကို ဆွဲလိုက်လုပ်နေတယ်။
လက်ခလယ်လေးကို ကျွန်မစောက်ပက်ခေါင်းထဲ ထည့်တော့ အော်မိမှာစိုးလို့ ကောင်လေးပုခုံးကိုကိုက်ထားရတယ်။ လက်လေးနဲ့အဝင်အထွက် မှန်မှန်လုပ်ပေးတော့ စောက်ဖုတ်က မနာတော့ပဲကောင်းလာတယ်။ လက်တစ်ချောင်းကနေ နှစ်ချောင်းပူးထည့်လိုက်တော့ ကြပ်ကြပ်ထုပ်ထုပ် တစ်မျိုးလေး။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်လေးရဲ့ အဝင်အထွက်တွေက မြန်လာတယ်။ သေလေက်အောင်ကောင်းတာပါပဲ။ အဲ့ဒီနေရာတင် စောက်ပက်ကိုဖြဲပြီး ကားပေါ်ကယောက်ျားတွေအကုန်လုံးဝိုင်းလိုးတာကို ခံပြစ်လိုက်ချင်တယ်။ ကျွန်မပြီးသွားတော့ကောင်လးက သူ့ကို ဂွင်းထုပေးဖို့ပြောတယ်။ ကျွန်မက အပျိုကြီးဆိုတော့ အဲ့ဒါတွေသိပ်မသိဘူးလေ။
ကောင်လေးက ကျွန်မလက်ကိုကိုင်ပြီး သူ့လီးပေါ်ကိုတင်ပြီး သူ့လီးကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ခိုင်းတယ်။ အဲ့ဒါ ဂွင်းထုတာတဲ့။ ကျွန်မလည်းစိတ်ပါလက်ပါ ထုပေးနေဖြစ်တယ်။ သူလည်း ကျွန်မလိုပဲ အော်ချင်တာကို မေးရိုးကြီးထောင်အောင် အံကြိတ်ထားတယ်။ ကျွန်မ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆောင့်လိုက်တော့ ကျွန်မနို့တွေကိုလှမ်းညှစ်ရင်း ဆက်ဆက်တုန်ကာ ပြီးသွားတော့တယ်။
ကားကပေးတဲ့စောင်လေးကို နှစ်ယောက်တူတူခြုံပြီး နားနေတုန်း ကောင်လေးက ထိုင်ခုံအောက် ကားကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မပေါင်နှစ်လုံးကိုဖြဲပီး သူ့ခေါင်းဝင်လိုက်တယ်။
” ရှီး…..အိ်ု…..ကျွတ် ကျွတ်..”
ကျွန်မစောက်ဖုတ်လေးကိုဖြဲပြီး စောက်စိလေးကို မလွတ်တမ်းငုံခဲထားတာ ကျွန်မစောက်စိလေးတောင် ပြုတ်ထွက်ရမတက်ပါပဲ။ စောက်စိလေးကို သွားလေးနဲ့ ကိုက်လိုက် ချိုချဉ်လေးလိုစုပ်လိုက်လုပ်တော့ ခံရခက်လွန်းလို့ သူ့ဆံပင်တွေကိုတောင် ဆွဲထားမိတယ်။ သူကတော့ ကျွန်မရဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားထူထူကြီးတွေကို အငမ်းမရစုပ်နေစဲ။
အသံမြည်အောင်ယက်ဘဲ စောက်ဖုတ်ကို ဖိဖိယက်တော့ သူ့မေးစေ့ကအမွှေးငုတ်စိလေးတွေက ကျွန်မစောက်ဖုတ်တပြင်လုံး ယားကျိကျိဖြစ်လာတယ်။ သူ့လျှာလေးကိုလည်း ကျွန်မစော်ခေါင်းထဲ ထိုးထိုးသွင်းတယ်။ ကော့ပြန်နေအောင် ကောင်းတာပါပဲ ။ကားပေါ်မှာ အသံမထွက်ရဲတော့ သူ့ဆံပင်တွေကို နာနာဆွဲမိတာပေါ့။
ကျွန်မက ဆွဲဖယ်ပေမယ့် သူကမဖယ်တော့ ကျွန်မစောက်ရည်တွေ သူ့မျက်နှာကိုပမ်းလိုက်မိတယ်။ သူ့မျက်နှာပေါ်က ကျွန်မရဲ့စောက်ရည်ပူတွေကို တစ်ရှုးလေးနဲ့ ယုယုယယသုတ်ပေးနေတုန်း သူက ကျွန်မနှုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲနမ်းပြီး နို့သီးဖျားလေးကို ညစ်တယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကားမီးက လင်းလာတယ်။ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းရောက်လို့ နားတာပေါ့။ သူရော ကျွန်မရော ကားပေါ်ကဆင်းပြီး အစားစားကြတယ်။ ကားပေါ် လူတွေအားလုံးတက်ပြီး ကားစထွက်တော့ မီးမှိတ်သွားတာနဲ့ ကောင်လေးရဲ့လက်တွေက ကျွန်မနို့တွေပေါ်ကို ရောက်လာတော့တာပဲ။ ကျွန်မလက်ကိုလည်း သူ့လီးပေါ်ကို တင်ပေးတယ်။ သူတောင် ကျွန်မကို ယက်ပေးသေးတာပဲဆိုပြီး ကျွန်မလည်းရှက်မနေတော့ဘဲ ထိုင်ခုံပေါ်ကဆင်း အောက်မှာထိုင်ပြီး သူ့လီးကို စုပ်ပေးတာပေါ့။
ကျွန်မက သိပ်မလုပ်တက်ပေမယ့် သူကတော့ ဖီးတက်ပြီး မျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့လို့။ သူကောင်းတယ်ဆိုတော့ နာနာလေးဖိစုပ်ပေးတယ်။ လီးတစ်ချောင်းလုံးကို ပါးစပ်ထဲ ဝင်သလောက်သွင်းပြီးစုပ်တယ်။ လီးထစ်လေးကို လျှာနဲ့ ပွတ်ဆွဲတယ်။ လီးရည်တွေ စိုရွှန်းနေတဲ့ သူ့လီးထိပ်လေးနဲ့ ကျွန်မနှုတ်ခမ်းလေးကို နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးသလို ပွတ်တယ်။
အော်လိုက်မိတာ ကျွန်မ။ ကျွန်မတုန်းက သူ့ဆံပင်ဆွဲသလို သူလည်း ကျွန်မရဲ့ တင်ပါးဖုံးအောင်ရှည်တဲ့ဆံပင်ကို သူ့လက်နဲ့ တင်းနေအောင်ရစ်ကိုင်ထားတော့ နာတာပေါ့။ ပြီးတော့ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်မနို့အုံကြီးကို တအားညစ်နေသေးတယ်။ ဘယ်သူမှ မကိုင်ဖူးတဲ့ အပျိုနို့အုံတင်းတင်းအိအိလေးကို သူ့ဗလကြီးနဲ့ မညှာမတာညှစ်ချေနေတာခံရတာ တချက်တချက် အသက်ရှုရပ်သွားမတက်ပဲ။
စောစောက သူ့လီးကို ကျွန်မက စုပ်ပေးတာ။ အခုသူက လီးကိုကော့ကောထိုးပြီး ကျွန်မပါးစပ်ကို လိုးနေတာ။ သူ့လီးကြီးကရှည်တော့ ကျွန်မအာခေါင်ကို ထောက်ထောက်မိတာ မျက်ရည်တောင် ဝိုင်းတယ်။ သူ့အားကြီးကသန်တော့ ရုန်းလို့လည်း မရဘူး။ ဆံပင်ဆောင့်ဆွဲပြီးပါးစပ်ကိုဆောင့်လိုး နို့ကို တအားချေတာခံနေရတာ သေလုမျောပါးပဲ။
မပြောမဆိုနဲ့ ကျွန်မပါးစပ်ထဲကို လီရည်တွေပမ်းထည့်လိုက်တယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုတော့ ရွံလို့ ထွေးထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ သူလည်း တော်တော်မောသွားလို့ ထိုင်ခုံကျောမှီကို မှီပြီးနားတယ်။
အမောပြေတာနဲ့ သူ့လက်က ကျွန်မစောက်ပက်ထဲကို နှိုက်တော့တာပဲ။ ကျွန်မကလည်း သူ့လီးကို ပြန်ကိုင်ထားတယ်။ သူ့လက်ရဲ့အစွမ်းတွေကြောင့် ခဏခဏပြီးလို့ ကျွန်မဖြင့်မြော့ပြီး စောက်စိကို ကျိန်းနေတာပါပဲ။ သူလည်း ကျွန်မရဲ့ထုပေးမှုအောက်မှာ မြော့နေတာပါပဲ။ ကားဆိုက်ခါနီးကျတော့ သူက တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောတယ်။
တဲ့။ ကျွန်မလည်း သူဘယ်လိုနှိတ်စက်မှလဲ သိချင်လို့ခေါင်းငြိမ့်လိုက်တယ်။ ကားလည်းဆိုက်ရော သူက တက္ကစီတစ်စီးငှါးပြီး ဟိုတယ်ကို မောင်းခိုင်းလိုက်တယ်။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရောက်တော့ ကျွန်မကို ကားပေါ်မှာထားခဲ့ပြီး သူက ဆင်းသွားတယ်။
“မမကို နှိပ်စက်ဖို့ ပစ္စည်းတွေသွားဝယ်တာ”
မပြဘူးလို့ပြောလို့ ကျွန်မက စိတ်ကောက်ပြီး ဟိုဘက်လှည့်တော့ သူက ကျွန်မကို အတင်းဆွဲလှည့်တယ်။ ကျွန်မကလည်း ရုန်းတာပေါ့။ ကျွန်မပါးကိုရွှတ်ခနဲနမ်းလိုက်တော့ ကျွန်မက သူ့ကိုထုတာပေါ့။ ထုတဲ့လက်ကိုဖမ်းဆွဲထားပြီး ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးကို သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်တယ်။ ကားဆရာကြည့်နေတယ် လို့ပြောလိုက်မှ လွှတ်ပေးတယ်။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကောင်ဆိုးလေး။
ဟိုတယ်မှာ ၂ယောက်ခန်းယူလိုက်တယ်။ အစားအသောက်တွေကိုလည်း အခန်းထဲပို့ဖို့မှာခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ရေတူတူချိုးကြတယ်။ ရေချိုးရင်း ကျွန်မအဖုတ်ကို ဆွတယ် နို့ကြီးတွေကိုညှစ်တယ်။ လိုးတော့မလိုးပေးဘူး။ တစ်လမ်းလုံးဆွခံခဲ့ရတာရော ရေချိုးရင်းဆွတာရောကြောင့် ကျွန်မစောက်ဖုတ်က တအားရွနေပြီ။ အလိုးခံကြည့်ချင်လှပြီ။
ရေချိုးပြီးတော့ကျွန်မကို ကုတင်ပေါ်မှာလှဲခိုင်းပြီး သူ့ဝယ်ခဲ့တဲ့အိတ်ထဲက ကြိုးခွေကိုထုတ်တယ်။ လက်တစ်ဘက်နဲ့ ခြေထောက်တစ်ဘက်စီကို ပူးချည်လိုက်တယ်။ ကျွန်မပုံစံက ခြေထောက်ကြီးမြှောက်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးဖြဲပီး သူလာဖို့ကို ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပဲ။ ယောက်ျားလိုးတာတစ်ခါမှ မခံရဖူးဘဲ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် လုပ်တာခံရတော့မှာဆိုတော့ ရင်တွေလည်းခုန် ကြောက်လည်းကြောက်မိတယ်။
သူ့အိတ်ထဲကနေ ကြာပွတ်တစ်ခုထုတ်တယ် ညှက်လေးတွေလည်းထုတ်တယ်။ ကြာပွတ်က ထိပ်ဖျားမှာ သားရေအမွှေးဖွားလေးတွေပါတယ်။
ညှက်လေးတွေနဲ့ ကျွန်မနို့သီးဖျားလေးတွေကို ညှက်တယ်။ နာတာပေါ့။ ပါးစပ်ကိုတိတ်နဲ့ ကပ်ထားတော့ အော်လို့လည်းမရဘူးလေ။ ကျွန်မနို့တွေကို ကြာပွတ်နဲ့ရိုက်ပြန်တယ်။ စပ်ပေမဲ့ ခံစားရတာ တမျိုးလေး။
ခဏနေတော့ ကျွန်မပါးစပ်ကတိတ်ကိုခွာပေးပြီးတော့ ရလားလို့မေးတယ်။ အတွေ့အကြုံသစ်ရချင်တာရော ထန်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်ရော ရတယ်လို့ပဲ ဖြေလိုက်တယ်။
ကျွန်မစာက်ပက်ကိုဖြဲဖြဲပြီး စောက်စိလေးကို ကြာပွတ်နဲ့ တရွှမ်းရွှမ်းနေအောင် မညှာမတာအဆက်မပျက် ရိုက်တယ်။ ကျွန်မစောက်ဖုတ်လေးကို နီရဲပြီး စပ်နေတာပဲ။ နို့စို့စက်နှစ်ခုကိုယူပြီးတော့ ကျွန်မနို့တွေမှာတပ်တယ်။
နို့စို့စက်တွေရဲ့နို့ကို ဖိကြိတ်ချေမှုကြေညင့် ကျွန်မစောက်ပက်မှာ အရည်ကြည်လေးတွေ စိမ့်လာတယ်။
ကျွန်မစောက်စိကို ကျဉ်စက်နဲ့ ဖိကပ်ထားတော့ ဘယ်ခံနိုင်မလဲ။ အော်ရတာ အသက်ရှုရပ်မတက်ပဲ။ ခဏကြာတော့ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံး ကျင်ပြီးတုန်တက်လာပြီး စောက်ရည်တွေထွက်တယ်။
လို့ ကျွန်မက ပြောပေမယ့် သူက တုန်စက်ကို မဖယ်ပေးဘူး။
ကျွန်မဘယ်လိုပဲ အော်အော် သူက ကျွန်မစောက်စိနဲ့ ကျင်စက်ကို ကပ်ထားတုန်းပဲ။ စောက်ရည်တွေ ခဏခဏထွက်ပြီး ပြီးသွားလို့ ကျွန်မဖြင့်အော်တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူး။ မြော့နေပြီ။ စောက်ခေါင်းထဲကို ခုထက်ထိ လီးထည့်ပြီးမလိုးသေးဘူး။
ကြိုးတွေဖြည်ပေးပြီးတာနဲ့ သူရိုက်လို့ နာကျင်နေတဲ့ ကျွန်မစောက်ဖုတ်ကိုငြင်ငြင်သာသာ ယက်ပေးတယ် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကိုလည်း တပြွတ်ပြွတ်စုပ်တယ်။ စောက်စိကို ဆွဲစုပ်လိုက်တော့ စောစောက နာတာတွေတောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိဘူး။ ကျွန်မကလည်း အညှာလွယ်လွန်းပါတယ်။ သူယက်ပေးလို့သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ထပ်ပြီးသွားတယ်။ သူ့မျက်နှာကို စောက်ရည်ပူတွေနဲ့ပမ်းမိတာပေါ့။
ကျွန်မစောက်ဖုတ်ထဲကို သူ့လီးထိုးသွင်းလိုက်တော့ အရည်တွေဘယ်လောက်ပဲ ရွှဲနေပေမယ့် အပျိုမြှေးက ခံနေတော့ အရမ်းနာတာပဲ။ ကျွန်မက နာတယ်ပြောတော့ လီးကိုဆက်မသွင်းသေးဘဲ ကျွန်မနို့လေးတွေကို စို့ပေးနေတယ်။ နို့သီးထိပ်မှ နို့စို့စက်တပ်ထားတုန်းက ကောင်းပေမယ့် ခု လူကိုယ်တိုင်စို့ပေးတာက ပိုခံလို့ကောင်းတယ်။
နို့ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်စို့ပေးနေတော့ စောက်ဖုတ်က ရွတက်လာလို့ အထဲဝင်အောင်ထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။
အပျိုမြှေးပေါက်သွားပြီး လီးက သားအိမ်ဝကို ဒုက်ခနဲလာဆောင့်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ သူက အဆက်မပြတ်ဆောင့်တော့တာပဲ။
“အား…. မောင်လေး လိုးပေး…လိုးပေး… အိုး…. အား….အား…..”
ကျွန်မရဲ့နို့ကြီးတွေကို ကိုင်ဆောင့်ဆွဲပြီး ကျွန်မစောက်ဖုတ်ကို ဆောင့်လိုးတာဆိုတာ စောက်ဖုတ်ကြီးတောင် ကွဲထွက်ရမတက်ပဲ။
“ကုန်းပေးအုံး မမ ”
ကုန်းပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် ကျွန်မအိုးကြီးတွေကို ကိုင်ပြီး ဆောင့်လိုးတယ်။ ကျွန်မတင်ပါးကိုလည်း သူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့တဖြန်းဖြန်းကို ရိုက်တာ။
” ကျွန်တော့်အပေါ်တက်ဆောင့်ပေးပါလား အမ ”
ဘာဆေးစားထားလိုလဲတော့မသိဘူး အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့သန်ချက်ကတော့။ ဆက်တိုက်လိုးနေတာ တစ်နာရီကျော်ပြီ နဲနဲမှ မကျသေးဘူး။ ကျွန်မသာ အကြိမ်ကြိပ်မ်ပြီးလို့ စောက်ဖုတ်ကို ပူထူနေပြီ။
“အား…. မမ ကောင်းလိုတာ မမရယ် မမစာက်ဖုတ်ကြီးက အရမ်းလိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ အား…. မမ….. ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်”
ကျွန်မက အပေါ်တက်ဆောင့်နေတာကို သူက အောက်ကနေ ပြန်အသားကုန်ပြန်ကော့ထိုးရင်း ပြီးသွားသည်။ လီးရည်ပူတွေ စောက်ခေါင်းထဲ ပန်းခံလိုက်ရသည့်အရသာက ထူးလှသည်။
ခဏပဲနားပြီး သူက ကျွန်မစောက်ခေါင်းထဲကို သူဝယ်လာတဲ့ လီးတုကြီးထည့်တယ်။ ကျွန်မက ငြင်းပေမယ့် သူက အတင်းလုပ်တယ်။ အကြိမ်ကြိမ်ပြီးထားလို့ မြော့နေတဲ့ကျွန်မက သတ်တောင်လစ်ချင်နေပြီ။ လီးတုနဲ့ ကျွန်မအော်ဟစ်နေတာမြင်ပြီး သူထန်လာပြီး ကျန်မကိုတက်ခွတော့ ကျွန်မက သတ်လစ်သွားခဲ့ပြီ။ သူဘယ်လောက်ထိ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလိုးတာကိုမသိတော့ဘူး။ ။